अबकाे भाेट बलात्कारीलाई कडा सजाय कबुल गर्नेलाई
- मनीषा अधिकारी | बुधबार, चैत २, २०७८
दुई दिनअघि मोरङमा डेढ वर्षीया बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भयो । सोही जिल्लामा केही दिनअघि मात्र १२ वर्षीया बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भयो । उनको न्यायका निम्ति पीडकलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउन धेरैले सडकमा रगत पसिना बगाउनुपर्‍यो । तर न्याय दिने कुरा कहाँ पुग्यो, कसैलाई चासोको विषय बनेन । नेपालमा न्याय माग्न कि त आफ्नो टाउको फुटाउनुपर्छ, कि त पहुँच निकै बलियो चाहिन्छ । टाउको फुट्ने सबैले न्याय पाउँछन् भन्नु पनि एक भ्रम मात्र हो । तर, पहुँच बलियो हुनेले न्याय पाउँछन् पनि । उनीहरूलाई नियम कानुनले पनि छुँदैन ।
जुन देशमा नारीलाई देवी मानी पुजिन्छ, जुन देशको सम्मानीय राष्ट्रपति महिला छ, त्यही देशमा बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधलाई कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूले पनि सामान्य रूपमा लिएको देखिन्छ । यहाँ बालिकाहरूलाई बलात्कारपछि हत्या गर्दा हामी 'मात्रै कठैबरा' सिबाय केही भन्न र गर्न नसक्ने अवस्थामा छौँ । देशमा बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधका घटनालाई अत्यन्तै सामान्य रूपमा लिएको देख्दा हामी अझै सीताले अग्निपरीक्षा दिएको युगमा छौँ कि भन्ने महसुस हुन्छ ।
हे महिला अधिकारकर्मी, हे न्यायदेवी, हे आफूलाई अभियन्ता भन्नेहरू हो, हिजो लैङ्गिक हिंसा भयो भनेर बुरुक्क उफ्रिरहँदा आज यी कलिला कोपिलाका निमित्त कुनै आवाज छ कि छैन, जसलाई कोक्रोबाट उठाएर लगी बलात्कार गरी मारेर प्लास्टिकमा पोको पारेर फालियो ?
न्यायदेवीको घरमा कलिला कोपिला छ्न् कि छैनन् ? आफू, आफ्ना आफन्त, नजिकका साथीहरू र भगवान्‌लाई झैँ ढोक चढाउँदै मानिआएका आफ्ना नेताज्यूहरूलाई र सेलेब्रिटीलाई कसैले गाली गर्दा, कसैले आलोचना गर्दा, गलत कुराको खण्डन गर्दा लैङ्गिक हिंसा भो भन्दै बुरुक्क उफ्रिने ती गोडाहरू, तथानाम शब्दहरू लेख्ने ती हातका औँलाहरू, तुच्छ वचनको वाण हान्ने ती ओठहरू आज यहाँ अत्यन्तै दुःखद घटनाका निमित्त चाहियो, त्यही आवाज दिनुहोला ।
सम्पूर्ण नेपाली महिलाको पक्षमा उभिनुपर्ने अवस्था आउँदा र यसरी दैनिकजस्तो कलिला कोपिला निमोठिँदा बिर्सनुस् हजुरको पार्टी (गुटउपगुट) । बिर्सनुस् कसलाई बलात्कार भयो । बिर्सनुस् उसको जात धर्म के हो । दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्नुस्, मात्रै सम्झिनुस्– एक बालिकालाई बलात्कार भयो, उसको हत्या भयो । र, सम्झनुस्– उसलाई न्याय दिनुपर्छ भन्ने ।
हिजो १८ महिनाकी नाबालिकाको बलात्कारपछि बीभत्स हत्या भयो । केही दिनअघि सोही जिल्लामा १२ वर्षीया बालिकालाई बलात्कारपछि बीभत्स हत्या भयो । यस्ता घटना दोहोरिइरहनुको मुख्य कारण अपराध गर्नेलाई कडा कारबाही नहुनु हैन र ? निर्मला प्रकरणको दोषी लुकाउँदालुकाउँदै पुन: सुदूरपश्चिममै भागिरथी भट्टको बलात्कारपछि बीभत्स हत्या हुनु हैन र ? निर्मला, भागिरथी र सम्झनाहरूको आत्माले तबसम्म शान्ति पाउँदैन, जबसम्म उनीहरूका परिवारले उचित न्याय र बलात्कारी हत्यारालाई हदैसम्मको सजाय हुँदैन ।
हुन त बलात्कारी हत्यारालाई फाँसीकै सजाय दिए पनि कम हुन्छ । तर, नेपालको संविधानमा त्यस्तो व्यवस्था छैन । जसका कारणले पीडित परिवार निराश बन्ने गरेका छन् । दैनिक बलात्कार र हत्याका घटना हुँदा त्यस्ता घटनामा संलग्न अपराधीहरूलाई संविधान संशोधन गरेर, नियमकानुन संशोधन गरेर भए पनि हदैसम्मको सजायको व्यवस्था गरिनु अपरिहार्य भइसकेको छ, ताकि आपराधिक मानसिकता बोकेकाहरूले घटना गराउनुभन्दा अगाडि एकचोटि कडा कानुनी व्यवस्थाबारे सोच्न बाध्य होऊन् ।
अब भोट माग्न घरघरमा आउने नेताहरूले 'के चाहिन्छ तपाईंहरूलाई' भनेर सोध्दा 'बलात्कारीलाई फाँसीजत्तिकै कडा सजाय चाहियो' भन्नुहोस् ।
डेढ वर्षकी नाबालिकाको बलात्कारपछि हत्या हुँदा, ८० वर्षकी आमाको बलात्कारपछि हत्या हुँदा पनि यस्ता घटनालाई सामान्य रूपमा किन लिइन्छ ? त्यस्ता जघन्य अपराधीहरूलाई हदैसम्मको सजाय दिने कडा कानुनी व्यवस्थाका लागि नेपालको संविधान अहिले संशोधन नभए कहिले हुन्छ ?
बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधमा संलग्नहरूको पहिचान हुन नसक्नु, भए पनि पीडितले न्याय पाउन नसक्नुमा राज्य स्वयम् अपराधप्रति गम्भीर नभएको जस्तो देखिन्छ । राज्यको यस्तो निकम्मापनका कारण अपराधीहरूको मनोबल अझ उच्च हुँदै गइरहेको महसुस भइरहेको छ । अब हरेक नेपालीले 'बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधको विषयमा कानुन संशोधन गरी अपराधीलाई मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्दा के हुन्छ' भनेर सम्बन्धित व्यक्ति तथा निकायलाई सोध्न जरुरी छ ।
१८ महिनाकी नाबालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको हिजो मंगलबारको घटनाका अपराधी पक्राउ परेको समाचार त आयो । यसअघि पनि यस्तै प्रकृतिका घटनाका अपराधीमाथि पक्राउपछि कारबाही गरेका केही घटनाहरू छन् । तर, बलात्कारी हत्यारालाई सजाय कस्तो भने सामान्य जरिवाना र गन्न सकिने दिन जेलजीवन मात्र छ । हाम्रो नेपालमा यसैलाई संशोधन गरी फाँसीबराबरको कडा सजायको व्यवस्था हुनु जरुरी छ । यसो भयो भने मात्र यस्ता जघन्य घटनामा कमी आउन सक्छ ।
के छोरी भएर जन्म लिनु अभिशाप हो ? जवाफ दे सरकार ! जवाफ दे कानुन ! पीडितले रुँदै कराउँदै बलात्कारीलाई फाँसीको सजायको माग गर्दा कानुनमा त्यस्तो व्यवस्था छैन भन्दै चुप बसेकाहरूले अहिले त्यो कानुन फेर्न प्रयत्न कति गरे ? फाँसीको सजाय हाम्रो संविधानमा नभए पनि अर्को अत्यन्त कडा सजायको व्यवस्था किन गरिँदैन ?
अब यसको जवाफ नीति निर्माता र राज्यको ठेक्का लिनेले दिनुपर्छ । आजबाट एउटै प्रण गरौँ, जोजो बलात्कार र हत्याका विरुद्धमा छौँ, बलात्कारी मानसिकता फालौँ र अपराधीलाई संरक्षण गर्नुहुँदैन, नेपालको संविधान संशोधन गरेरै भए पनि जघन्य अपराधीलाई फाँसीजत्तिकै कडाखालको सजाय दिने कानुन बनाऔँ । अबको चुनावमा भोट माग्न गाउँशहर छिरेका नेतासँग यही नै मुख्य माग राखौँ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत २, २०७८, २०:११:४८